Iza ireo kandidà filoham-pirenena any Mozambika amin’ny fifidianana volana Oktobra? · Global Voices teny Malagasy
Hanomboka amin'ny 31 Aogositra ny fotoana ofisialy ny fanentanana
Voadika ny 18 Aogositra 2019 5:46 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, русский, Ελληνικά, Italiano, Português
Fifidianana tany Nampula, 2013. Saripikan'i Txeka, nahazoana alalana.
Vao haingana no fantatra tao Mozambika ireo kandidà hirotsaka ho filoham-pirenena, efa-bolana latsaka tsy ahatongavan'ny fifidianana ankapobeny amin'ny 15 Oktobra.
Tamin'ny 31 Jolay, kandida miisa efatra no nankatoavin'ny Filankevitry ny Lalàm-panorenana ao Mozambika: Filipe Nyusi, Ossufo Momade, Daviz Simango ary Mário Albino.
Kandida roa lehibe no nesorina tao amin'ny fifaninanana: Hélder Mendoça sy Alice Mabota.
Mabota no vehivavy voalohany nikasa hilatsaka ho filoham-pirenena tany Mozambika. Araka ny filazan'ny Filankevitra dia tsy nahazo ny isan-tsonia ambany indrindra ilaina tamin'ny fanohanana azy hirotsaka ho hofidina izy .
Maro ireo Mozambikana no naneho ny heviny tamin'ny fanilihana azy, satria nalahelo izy ireo fa tsy nisy ny vehivavy nifaninana ho amin'ny toerana ambony indrindra ao amin'ny firenena. Hoy i Adriano Nuvunga, mpampianatra amin'ny Oniversite sady mpikatroka ara-tsosialy tao amin'ny Twitter:
Maneho fanilikilihana ara-politika ny fanilihana an'i Alice Mabota tsy ho kandidà filoham-pirenena ary mifanohitra amin'ny fandriampahalemana sy ny fihavanam-pirenena.
Ity fifidianana taona 2019 ity no ho voalohany hifidianan'ny Mozambikana ny governoram-paritra. Ny filoham-pirenena no manendry ny governora amin'izao fotoana izao.
Hifidy ny solombavambahoaka miisa 250 ihany koa ny olom-pirenena izay handrafitra ny Antenimieran'ny Repoblika manaraka.
Io no fifidianana ankapobeny fahenina hatramin'ny nankatoavana ny lalàm-panorenana avy amin'ny antoko maro tamin'ny taona 1992. Hanomboka ny 31 Aogositra amin'ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra. Hitsidika an'i Mozambika amin'ny 4 Septambra ny Papa Fransoà.
Hilatsaka hofidina indray i Filipe Jacinto Nyusi, filoham-pirenen'i Mozambika ankehitriny sady filohan'ny antoko Frelimo. Taorian'ny dimy taona nitondrany ny governemanta (2015-2019), nanankina ny fahatokisana tamin'i Nyusi indray ny antokon'ny fitondrana ho amin'ny dimy taona manaraka. Teraka tao Cabo Delgado, any avaratr'i Mozambika, efa Minisitry ny Fiarovana tamin'ny governemantan'i Armando Guebuza (2009-2014) teo aloha i Filipe Nyusi. Nandresy indray rehefa nilatsaka hofidiana ireo filohan'ny Frelimo rehetra izay nilatsaka teo alohany .
Ossufo Momade no voafidy ho filohan'ny Renamo, antoko mpanohitra lehibe indrindra ao Mozambika, taorian'ny fahafatesan'ny filohany teo aloha Afonso Dhlakama tamin'ny taona 2018. Ity no voalohany taorian'ny fifidianana demokratika voalohany tao Mozambika (1994) izay hilatsahan'ny Renamo tsy misy ny mpitarika azy manan-tantara sady malaza. Nanery ny antoko hanondro mpitarika vaovao ny fahafatesan'i Dhlakama. Teraka tao Nampula (avaratr'i Mozambika), nitana toerana isankarazany tao amin'ny Renamo i Ossufo Momade, ary fantatra ho lehilahy tànana an-kavanan'i Dhlakama tamin'ny raharaha miaramila izy.
Teraka tao an-tanànan'i Beira ao afovoany, hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena fanintelony misesy i Daviz Simango. Antoko nisintaka tamin'ny Renamo izay natsangan'i Simango tamin'ny taona 2009 ny Hetsika Demokratika ao Mozambika. Ben'ny tanàna tao Beira nandritra ny ampolo taona mahery i Daviz. Tamin'ny volana Oktobra 2018 izy no voafidy farany.
Mario Albino no filohan'ny Fikambanan'ny Hetsika Tafakambana ho amin'ny Katroka sy ny Fanavotana Feno, miorina any amin'ny tanàndehibe avaratra any Nampula. Tamin'ny taona 2018, nilatsaka ho fidiana ben'ny tanàna tao Nampula i Albino, saingy resy rehefa tsy nahazo afa-tsy totalim-bato 4.2 isanjato monja. Antoko nisintaka avy amin'ny MDM ny antoko AMUSI.